Izinhlobo ze-Spare Izingxenye zama shaft sha sha zama gear gear
Ama-Spare Parts gear shaft, izinhlobo zomphakeli we-spur gear
Amagiya & shafts Izakhi Zezikhala
Izingxenye ze-Gearbox OEM Replacement Spare.
Sinikezela ngamapharamitha weGear & shaft nezakhiwo zezinto ezibonakalayo.
Bheka imikhiqizo yethu
Sinikezela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, ezishibhile zamagiya we-gearbox ezinjengamagiya nama shafts.
Zonke izinhlobo zamabhokisi egiya lezimboni anamagiya nemishayo kufaka ne-Worm gear uhlobo olulodwa lwedivayisi yamagiya. Ama-Bevel Gears asetshenziswa kuzicelo. Amagiya weSpur angamagiya ajwayelekile abonwa kalula.Premium arborist mpahla kanye namagiya okukhuphuka kwesihlahla. Amagiya asizayo anolunye uhlobo lwamagiya angama-cylindrical ane-sliding trace trace. Ama-shaarts we-Gearbox umgodi welanga, shaft yeplanethi, ishafti elize, kanye nomshini wejubane eliphansi neliphezulu. shafts yangokwezifiso ngokuya ngesakhiwo sakho nezidingo zohlelo lwakho lokusebenza.
Mayelana Nemikhiqizo Yethu
Shaft yegiya enamaphrofayili abhekabheka
Umphini ubushelelezi futhi awunawo umgqomo; ikhwalithi yinhle futhi imodeli igcwele; Impilo yokugqoka engagunci ye-shaft yegiya yinde.Igiya noma i-cogwheel yingxenye yomshini ojikelezayo enamazinyo asikiwe. U-gearbox wayo oqonde ngqo wokushayela uqonde nokuhlelwa kwama-motors.I-gearmotor iyinhlanganisela yayo yonke into yemoto kagesi no-gearbox. Iphiniyoni iyigiya eliyindilinga. Gears zisebenza ngababili ukudlulisa nokuguqula ukunyakaza okujikelezayo ne-torque kukhulu kakhulu ekudluliseni. AmaSogears anikeza uhla oluphelele lwezixazululo zegiye kubasebenzisi emhlabeni wonke. Singumholi ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwawo wonke amagiya, kufaka phakathi isoftware yegiya ne-powertrain design, amagiya umshini wokugoba, amasistimu we-metering, izixazululo ze-automation, imishini ehlobene namagiya epulasitiki.
Sisebenzela zonke izinhlobo zezimakethe zamagiya, kusuka kumagiya anembeza ephezulu yamathuluzi wamandla nezinhlelo zokusebenza zezokwelapha, kuya kwezimoto zokushayela nezimoto, kuya kumagiya amakhulu ophethiloli bomoya kanye nemishini yezimayini.
Singabantu ongoti abazinikezele ekukhiqizweni kwemikhiqizo yobuchwepheshe begiya eliphezulu ephezulu.
Imodeli yebhizinisi eqhubekayo yeSogears ibandakanye wonke amalungu eSogears ukuba khona komhlaba wonke. Sithatha indlela ephumelela kunazo zonke ekwehliseni ukulahleka nokusetshenziswa kwamandla ngendlela efanele kubandakanya ukuklanywa kwemikhiqizo esimeme nezinqubo. Sisebenza wonke umsebenzi nokukhiqizwa, siyakulawula futhi siyaqhubeka nokwenza ngcono ukusebenza kwawo. Zonke izakhiwo ezinkulu zomhlaba ziqinisekiswe nge-ISO. Okwe-gearing kwamaplanethi uhlelo lwegiye oluqukethe eyodwa noma ngaphezulu yangaphandle. IFifth Gear uchungechunge lwamagazini wethelevishini yezimoto yaseBrithani.Sinikeza uhla olubanzi lwemishini yokuphakamisa esezingeni eliphakeme ukuze ivumelane nazo zonke izidingo.Incazelo yePinion Gear. Ngochungechunge lwamathuluzi omshini amahle njengamathuluzi womshini wase-German Liebherr, amathuluzi womshini wase-German EMAG, amathuluzi womshini waseJapan Mitsubishi, amathuluzi womshini waseJapan, namathuluzi womshini waseJapan Longze.
Uma unemikhiqizo oyithandayo, woza uxhumane nathi! Sikulungele futhi sibheke phambili ekubambisaneni kwethu. Sithatha ikhwalithi njengenzuzo yethu futhi intengo ephansi ngobuqotho. Uma unemibuzo, ungaxhumana nathi, sizokujabulela ukukusiza!